Maaskaro Wajiga, Kala Goynta Guud, Gacmo Gelinta - Pantex
3 Kooxda Shakhsiyaadka
Mid kastaa wuxuu qabtaa howlihiisa, koox dad ah oo leh isugeynta saxda ah ee xirfadaha xirfadeed si ay kaaga taageeraan talo kugu habboon, kama walwaleyso naqshadeynta, nidaamka kala-sooca iyo soo-saarka, adeegga.
2 Saacadood Si Deg Deg Ah Jawaab
24ka saacadood ee khadka tooska ah, jawaabta deg degga ah ee 2 saacadood, had iyo jeer way ka dhakhso badan tahay kuwa kale, si ay kuu siiyaan talo soo jeedin iyo xallin.
1 Jooji Xalka
Waxaan waayo-aragnimo buuxda u leenahay soo-saarka iyo u adeegidda, qaabeynta / sampling / wax soo saarka / keenista kaliya ee shirkadayada, waxaan kaa caawin doonaa inaad hubiso hannaan wax soo iibsi oo wax ku ool ah, Waxay kuu baajineysaa waqti, dadaal iyo walwal.
Xafiisku wuxuu ku yaal magaalada dalxiiska ee caanka ah-Hangzhou, Pantex waa shirkad xirfad-yaqaan ah oo ku hawlan soo-saarka iyo iibinta ilaalinta alaabada iyo dharka diyaarka ah iyo badeecooyinka la xiriira. Shirkadda waxay leedahay qol-show iyo R&D xarunti Hangzhou iyo hal100%warshad iska leh magaalada huang shan, oo ah buurta ugu quruxda badan Shiinaha oo ay ku taal, oo kaliya 2 saacadood baabuur, 1.5 saac tareen xawaare sare leh oo ka socda Hangzhou. Warshadda waxaa la aasaasay 2007.